ICummins izinze eColumbus, eIndiana, eMelika. I-Cummins ineearhente zokuhambisa ezingama-550 kumazwe angaphezu kwe-160 atyale imali engaphezulu kwe-140 yezigidi zeedola e-China. Njengomtyali mali omkhulu welinye ilizwe kushishino lweenjini zaseTshayina, kukho amashishini asibhozo ngokudibeneyo kunye namashishini aphethwe ngabanini eChina. I-DCEC ivelisa i-B, C kunye ne-l uthotho lweedizili ngelixa iCCEC ivelisa umbane we-M, N no-K. Iimveliso ziyahlangabezana nemigangatho ye-ISO 3046, ISO 4001, ISO 8525, IEC 34-1, GB 1105, GB / T 2820, CSH 22-2, VDE 0530 kunye neYD / T 502-2000 ”.
UDeutz ekuqaleni wasekwa ngu-NA Otto kunye no-Cie ngo-1864 yeyona nto iphambili ekwenziweni kweenjini ezizimeleyo ezinembali ende. Njengoluhlu olupheleleyo lweengcali zeenjini, i-DEUTZ ibonelela ngee-injini ezipholileyo ngamanzi kunye nomoya opholileyo onamandla ukusuka ku-25kW ukuya ku-520kw onokusetyenziswa kakhulu kubunjineli, iiseti zejeneretha, oomatshini bezolimo, izithuthi, iindawo zikaloliwe, iinqanawa kunye nezithuthi zomkhosi. Kukho iifektri ze-4 zeenjineli eJamani, iilayisensi ezili-17 kunye neefektri zentsebenziswano kwihlabathi liphela ezinamandla e-diesel generator ukusuka ku-10 ukuya ku-10000 wamandla ombane kunye negesi yejenereyitha ukusuka ku-250 ukuya kwi-5500. IDeutz ineenkxaso-mali ezingama-22, amaziko enkonzo ali-18, iziseko zeenkonzo ezi-2 kunye neeofisi ezili-14 kwihlabathi liphela, ngaphezulu kwamaqabane angama-800 eshishini abambisene noDeutz kumazwe angama-130
I-Daewoo Co., Ltd. yasekwa ngo-1937. Iimveliso zayo zihlala zimela inqanaba lophuhliso lwemizi-mveliso yaseKorea, kwaye zenze impumelelo eyaziwayo kwicandelo leinjini zedizili, abembi bezithuthi, izithuthi, izixhobo zomatshini ezizenzekelayo kunye neerobhothi. Ngokubhekisele kwiinjini zedizili, ibisebenzisana neAustralia ukuvelisa iinjini zaselwandle ngo-1958 kwaye yasungula uthotho lweenjini zedizili ezinobunzima kunye nenkampani yendoda yaseJamani ngo-1975 umzi-mveliso waseDaewoo eYurophu wasekwa ngo-990, iDaewoo Heavy Industry Yantai Inkampani yasekwa ngo-1994 Inkampani eDaewoo Heavy Industry eMelika yasekwa ngo-1996. UDaewoo wajoyina ngokusesikweni iqela laseDoosan Doosan eMzantsi Korea ngo-Epreli 2005.
Injini yedizili iDoosan Daewoo isetyenziswa ngokubanzi kukhuseleko lwesizwe, ukuhamba ngenqwelomoya, izithuthi, iinqanawa, oomatshini bokwakha, iiseti zejenreyitha kunye nezinye iinkalo. Iseti epheleleyo yedizili yedizili yedizili iDoosan Daewoo yamkelwa lihlabathi ngobungakanani bayo obuncinci, ubunzima bokukhanya, amandla omthwalo olwa namandla ongezelelweyo, ingxolo ephantsi, iimpawu zoqoqosho nezithembekileyo, kunye nomgangatho wayo wokusebenza kunye nokukhupha igesi ukukhawulelana nokudibana nesizwe esifanelekileyo kwaye imigangatho yezizwe ngezizwe.
Isuzu Motor Co, Ltd. yasekwa ngo-1937. Iofisi yayo eyintloko ibekwe eTokyo, eJapan. Iifektri zikwisiXeko saseFijisawa, kwi-tokumu County naseHokkaido. Idume ngokuvelisa izithuthi zorhwebo kunye neenjini zangaphakathi zedizili. Ngomnye wabenzi bezithuthi ezinkulu nezindala ehlabathini. Ngo-1934, ngokwendlela esemgangathweni yoMphathiswa Wezorhwebo noshishino (ngoku liSebe lezoRhwebo, ushishino noRhwebo), kwaqaliswa ukuveliswa kweenqwelo-mafutha, yaye igama elithi “Isuzu” lathiywa igama lomlambo i-Isuzu kufutshane netempile yaseYishi. . Ukusukela ukuhlanganiswa kophawu kunye negama lenkampani ngo-1949, igama lenkampani le-Isuzu Automatic Car Co., Ltd. lisetyenzisiwe ukusukela ngoko. Njengophawu lophuhliso lwamanye amazwe kwixa elizayo, ilogo yeklabhu ngoku iluphawu loyilo lwangoku kunye nonobumba baseRoma "Isuzu". Ukusukela oko yasekwayo, i-Isuzu Motor Company ibisenza uphando kunye nophuhliso kunye nokuveliswa kweinjini zedizili ngaphezulu kweminyaka engama-70. Njengenye yamasebe amathathu oshishino e-Isuzu Motor Company (amanye amabini iyunithi yeshishini le-CV kunye neyunithi yeshishini le-LCV), exhomekeke kubuchwephesha obomeleleyo be-ofisi elikomkhulu, iyunithi yeshishini ledizili izinikele ekomelezeni ubambiswano lobuchule kushishino lwehlabathi. kunye nokwakha umzi mveliso wokuqala we-injini yedizili Okwangoku, ukuveliswa kwezithuthi zorhwebo ze-Isuzu kunye neenjini zedizili zikwindawo yokuqala kwihlabathi.
I-MTU, inkampani encedisayo yeqela iDaimler Benz, lelona lizwe liphezulu elenza umsebenzi osindayo we-injini yedizili, inandipha elona wonga liphezulu kushishino lweenjini Njengommeli obalaseleyo womgangatho ophezulu kolu shishino lunye ngaphezulu kweminyaka eli-100, iimveliso zalo esetyenziswa ngokubanzi kwiinqanawa, izithuthi ezinzima, oomatshini bobunjineli, iinqwelo zikaloliwe, njl. Njengomthengisi womhlaba, iinkqubo zaselwandle nezololiwe kunye nezixhobo zokusetha idizili, iMTU idume ngobuchwephesha bayo obuphambili, iimveliso ezinokuthenjwa kunye neenkonzo zodidi lokuqala
Iimveliso zeenjini zedizili zikaPerkins zibandakanya, 400 uthotho, 800 uthotho, uthotho lwe-1100 kunye no-1200 kuthotho lokusetyenziswa kwemizi-mveliso kunye no-400 uthotho, uthotho lwe-1100, uthotho lwe-1300, uthotho lwe-1600, uthotho lwe-2000 kunye nochungechunge lwe-4000 (eneemodeli ezininzi zegesi yendalo) zokuvelisa amandla. UPerkins uzibophelele kumgangatho, okusingqongileyo kunye neemveliso ezifikelelekayo. Abavelisi bakaPerkins bayahambelana ne-ISO9001 kunye ne-iso10004; iimveliso zithobela iMigangatho ye-ISO 9001 efana ne-3046, i-ISO 4001, i-ISO 8525, i-IEC 34-1, gb1105, i-GB / T 2820, i-CSH 22-2, i-VDE 0530 kunye ne-YD / T 502-2000. ”Kunye neminye imigangatho
I-Perkins yasekwa ngo-1932 ngusomashishini wase-Bhritane u-Frank, uPerkins e-Peter borough, e-UK, yenye yezona zihamba phambili ekuveliseni iinjineli. Yinkokheli yentengiso ye-4 - 2000 kW (5 - 2800hp) idizili engaphandle kwendlela kunye nejenreyitha yendalo. UPerkins ulungile ekwenzeni imveliso yejeneretha yabathengi ukuze ahlangabezane ngokupheleleyo neemfuno ezithile, ngenxa yoko ithembeke kakhulu ngabavelisi besixhobo. Inethiwekhi yomhlaba wonke engaphezulu kwe-118 yeearhente zikaPerkins, ezibandakanya ngaphezulu kwamazwe ali-180 kunye nemimandla, ibonelela ngenkxaso yemveliso kwiindawo ezingama-3500 zeenkonzo, abathengisi bakaPerkins babambelela kweyona migangatho ingqongqo yokuqinisekisa ukuba bonke abathengi banokufumana eyona nkonzo.
IShanghai MHI (iMitsubishi enamashishini anzima)
IMitsubishi Heavy Industry lishishini laseJapan elineminyaka engaphezu kwe-100 yembali. Amandla obuchwephesha obanzi aqokelelwe kuphuhliso lwexesha elide, kunye nenqanaba lobugcisa langoku kunye nemowudi yolawulo, yenza iMitsubishi Heavy Industry ibe ngummeli wemveliso yaseJapan. IMitsubishi yenze igalelo elikhulu ekuphuculweni kweemveliso zayo kwezokubhabha ngenqwelomoya, kubuchwephesha bomoya, koomatshini, kwishishini lokubhabha ngenqwelo moya kunye nomoya opholisa umoya. Ukusuka kwi-4kw ukuya kwi-4600kw, uthotho lwe-Mitsubishi yesantya esiphakathi kunye nesantya esiphezulu seeseti zejenereyitha ezisebenza kwihlabathi liphela njengamandla aqhubekayo, aqhelekileyo, alindileyo kunye nencopho yokucheba.
Yasekwa ngonyaka ka-1951, i-Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. izinze e-Yulin City, e-Guangxi, ineenkampani ezili-11 eziphantsi kolawulo lwayo. Iziseko zayo zemveliso zibekwe eGuangxi, Jiangsu, Anhui, Shandong nakwezinye iindawo. Inamaziko adibeneyo e-R & D kunye namasebe entengiso aphesheya. Ingeniso yayo ebanzi yokuthengisa yonyaka ingaphezulu kwe-20 yezigidigidi ze-yuan, kunye namandla emveliso yonyaka yeinjini ifikelela kwiiseti ezingama-600000. Iimveliso zenkampani zibandakanya amaqonga ali-10, uthotho ezingama-27 zeemoto ezincinci, ezikhanyayo, eziphakathi nezikhulu kunye neenjini zegesi, ezinamandla ombane we-60-2000 kW. Ngumvelisi wenjini kunye nezona mveliso zininzi kunye nolona hlobo lugcweleyo e-China. Ngeempawu zamandla aphezulu, i-torque ephezulu, ukuthembeka okuphezulu, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, ingxolo ephantsi, ukukhutshwa okuphantsi, ukuqina okunamandla kunye nezahlulo zentengiso ezizodwa, iimveliso ziye zaba ligunya elithandwayo lokuxhasa iilori eziphambili zasekhaya, iibhasi, oomatshini bokwakha, oomatshini bezolimo , oomatshini beenqanawa kunye noomatshini bokuvelisa amandla, izithuthi ezizodwa, iilori, njl. Kwicandelo lophando lwe-injini, inkampani yaseYuchai ibisoloko ithatha indawo yokuphakama kokuyalela, ekhokelela koontanga ukuba baqalise intlanganiso yokuqala ye-injini imigaqo kazwelonke ye-1-6 yokukhutshwa, ekhokelela uguquko oluhlaza kumzi mveliso we-injini. Inonxibelelwano lwenkonzo olugqibeleleyo kwihlabathi liphela. Iseke imimandla ye-19 yoThutho loRhwebo, imimandla yokufikelela kwisikhululo seenqwelomoya ezili-12, imimandla yamandla enqanawa eyi-11, iiofisi ezingama-29 kunye neeofisi zasemva kwemarike, ngaphezu kwezikhululo zeenkonzo ezingama-3000, nangaphezulu kweendawo zokuthengisa ezingama-5000 eTshayina. Iseke iiofisi ezili-16, iiarhente zeenkonzo ezingama-228 kunye neenethiwekhi zeenkonzo ezingama-846 eAsia, eMelika, eAfrika naseYurophu Ukufezekisa isiqinisekiso esidibeneyo sehlabathi.